प्रदीप र जसिता एक अर्काको बारेमा यसो भन्छन् « Ramailo छ
प्रदीप र जसिता एक अर्काको बारेमा यसो भन्छन्
नायक प्रदीप खड्का र नायिका जसिता गुरुङ ‘लिलिबिली’ ले जुराएको जोडी हो । चैत ३० गते प्रदर्शन मिति नजिकिदै गर्दा यो जोडीको फिल्म वृत्तमा मात्रै नभएर दर्शकमाझ पनि चर्चा छ । प्रदीप र जसिता एक अर्कालाई कसरी चिन्दछन् त ? हेर्नुस् यो रमाईलो भिडियो :
‘मलाई जसिता फ्रेन्डली र रमाईलो लाग्यो’, प्रदीप भन्छन्, ‘ऊ मिहेनती पनि छ ।’ यता जसिता चाहिं प्रदीपकी फ्यान हुन् । फिल्म ‘प्रेम गीत’ हेरेपछि जसिता प्रदीपको फ्यान भएकी हुन् । ‘मलाई त उहाँँको एक्टिङ राम्रो लाग्छ’ जसिता भन्छिन्, ‘उहाँ रियल लाइफमा पनि राम्रो हुनुहुन्छ ।’
एक अर्काको खुलेर तारिफ गर्ने प्रदीप र जसिता कतै प्रेममा त छैनन् ? प्रेम बारे सोधिएको प्रश्नको जवाफ चाहिं दुवैले स्पष्टसँग दिएनन् । ‘लिलिबिली’ सँगै गाईंगुईं रुपमा प्रदीप र जसिताको प्रेम चर्चा छ ।
मिलन चाम्स निर्देशित फिल्ममा यो जोडीसँगै प्रियंका कार्की, अनुपविक्रम शाही र सविन श्रेष्ठको मुख्य भूमिका छ । लिलिबिली लाई निर्देशक चाम्स, गोविन्द शाही र सुदीप खड्काले निर्माण गरेका हुन् ।